Adriana | | ဇီဝ, ပြန်လည်
El ပလပ်စတစ် ၎င်းသည်အပေါများဆုံးပစ္စည်းများအနက်မှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီးတချိန်တည်းတွင်၎င်းတို့နှင့်အတူထုတ်လုပ်သည့်အရာဝတ္ထုများ၊ ကွန်တိန်နာများနှင့်ဒြပ်စင်များစွာရှိသောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုအများဆုံးဖြစ်သည်။
ပလတ်စတစ်အများစုသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအဖြစ်သို့ရောက်သွားပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမခံရပါကအမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပလတ်စတစ်များပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စျေးပေါလောင်စာ အားလုံးသန့်စင်အထက်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတိုင်းသည် ၇၆၀ လီတာဒီဇယ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်း pyrolysis လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပလတ်စတစ်ကိုခွဲခြားရန်၊ သေးငယ်သောအပိုင်းအစများတွင်ကွန်တိန်နာများထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မီးဖို၌နိုက်ထရိုဂျင်ကိုအစာကျွေး။ လေဟာနယ်အောက်တွင်မီးရှို့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်အရည်အဖြစ်သို့သိပ်သည်းသောဓာတ်ငွေ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းကိုစစ်ထုတ်ပြီး၎င်းတွင်ရှိသည့်ညစ်ညမ်းသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားသည်။
၎င်းတို့အနက် Cynar သည်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိပလတ်စတစ်တစ်တန်နှင့် ၆၆၅ လီတာထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီဇယ်၏ 190 လီတာ ဓါတ်ဆီ နှင့်ရေနံဆီများအတွက် 95 ။
တဖြည်းဖြည်းချင်း၎င်းသည်လောင်စာများထုတ်လုပ်ရာတွင်ပလပ်စတစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ တစ်ဖက်တွင်ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်လောင်စာဆီပြတ်လပ်ခြင်းနှင့်အတူပြsolနာနှစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာ.
ပလပ်စတစ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေသည့်အလွန်ညစ်ညမ်းသောအရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလျှော့ချပြီး၎င်းကိုသာအသုံးပြုသင့်သည် ဇီဝပျက်စီးခြင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ဇီဝလောင်စာ » ဇီဝ » ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်ဇီဝဒီဇယ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
ဂျင်မီ Antezana G. အ ဟုသူကပြောသည်
ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီနှင့်ရေနံဆီထုတ်လုပ်သည့် ၂၅၀ ကီလိုဂရမ် / တစ်နာရီနှုန်းရှိသောစက်ကိုအဘယ်မှရရှိနိုင်ပါသနည်း။
Jimmy Antezana G. ကိုစာပို့ပါ။